COVID-19 : Situation au 03 Août 2021 - ewa.mg
COVID-19 : Situation au 03 Août 2021
News - Santé - COVID-19 : Situation au 03 Août 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19 : Situation au 03 Août 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Sur les 197 tests effectués ces dernières 24 heures, 11 personnes sont diagnostiquées positives au coronavirus d’après le bilan épidémiologique rapporté ce mercredi 4 août 2021. Ainsi, Madagascar compte actuellement 42.753 contaminations depuis l’apparition de la pandémie de covid-19 dans le pays. Ces nouveaux cas ont été localisés dans la région Analamanga (3), Matsiatra Ambony (5), Vatovavy Fitovinany (1) et Itasy (2).
Ce jour, 4 nouveaux patients ont été déclarés complètement guéris, portant à 42.411 le nombre total des personnes rétablies dans tout le territoire malagasy depuis mars 2020. Toutefois, quelques malades sont en cours de traitement, dont 27 dans un état critique. Par ailleurs, aucun nouveau décès n’a été communiqué. Le nombre officiel des victimes reste ainsi à 947.
L’article COVID-19 : Situation au 03 Août 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nivoaka tamin'ny : 04/08/2021
Tsenaben’ny Fizahantany III: mihena hatrany amin’ny -50% ny tolotra
Miezaka mampiroborobo ny fizahantany ny mpisehatra aminy, na eo ary ny krizy coronavirus, mampihisatra ity lafiny ity. Hatao ny 8, 9 ary ny 10 jlay ho avy izao ny Tsena­ben’ny Fizahantany, andiany fahatelo, etsy amin’ny zari­dainan’Antaninarenina. Mai­maim-poana ny fidirana, ary tanjona ny hanaovana ity he­tsika ity ho fotoana manan-danja amin’ny mpandraha­raha amin’ny fizahantany eto an-toerana sy ny Malagasy. Tombon-dahiny lehibe hia­vaka amin’izany ny fampihenana hatrany amin’ny -50% fa­rafahakeliny ny tolotra omen’ ireo mpandraharaha. Tsiahivina fa nahatratra latsaky ny 7.000 ny mpitsi­dika ny Tsenaben’ny Fizahan­tany andiany faharoa, natao ny marsa 2021.Njaka A.L’article Tsenaben’ny Fizahantany III: mihena hatrany amin’ny -50% ny tolotra a été récupéré chez Newsmada.
Fampanaraha-dalàna CUA : hosaziana ireo mpivarotra amin’ny « kalesa »
Tsy hisy intsoany ny indrafo. Nanambara ny eo anivon’ny CUA fa manomboka mirongatra sy mihamaro anisa ireo mpivarotra amin’ny kalesa eto Antananarivo Renivohitra. « Tsy ara-dalàna sy mibahana ny arabe ary ny sisin-dalana “troitoir” izany. Handray fepetra ny fiadidiana ny Tanàna amin’ny fanalana azy ireny”, hoy ny talen’ny tsena, Randrianarisoa Rija, omaly. Nanao fidinana ifotony ny teo anivon’ny fitantanana ny tsena ary koa ny fitantanana ny fitaterana sy fifamoivoizana an-tanàn-dehibe eo anivon’ny kaominina ary ny “Brigade mobile”, omaly. Niompana amin’ny fanentanana ireo mpivarotra voankazo sy entana isan-karazany amin’ireny kalesa atosika ireny izany mba ho fampahafantarana azy ireo fa tsy azo ekena intsony ny fanaovany fivarotana. “Voararan’ny lalàna izany ary voafaritra ao anatin’ny CMH koa”, hoy izy ireo.Na izany aza, mbola fampahafantarana ny nataon’ny CUA. “Manomboka ny alatsinainy izao ny hampiharana ny sazy ho an’ireo mbola minia manao izany. Hogiazana ny entana sy ny kalesa ary ny lamandy aloa”, hoy ihany ny CUA. Any anaty tsena ihany no tokony hivarotana.Anisan’ny nanaovana ny fanentanana ny teny Ankazomanga, Tsenan’ Ambohimanarina, 67 ha sy ny tsenan’ Anosibe.Synèse R.L’article Fampanaraha-dalàna CUA : hosaziana ireo mpivarotra amin’ny « kalesa » a été récupéré chez Newsmada.
RFF Amparibe Famonjena: anio ny vavaka ho an’ny mpanala fanadinana…
Andiany faha-18 ny vavaka ho an’ny mpanala fanadinana sy fangataham-pitahiana ho an’ny tanindrazana fanaon’ny Rindra fanatanjahantena sy fialamboly na ny RFF Amparibe Famonjena. Vavaka sy rindrankira hotontosaina, anio manomboka amin’ny 5 ora sy sasany hariva, ao amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Hohiraina ao anatin’izany ny sanganasan’i Clim, i Bessa, i Haingo, i Henri Ratsimbazafy, i Noël Rakotoarivony. Hisy ihany koa ny fandraisan’anjaran’i Henri Ratsimbazafy amin’io fotoana anio io. Elanelanin’ny antsa tonokalon’i Dimbin’ny Ala sy ny Ny Rahona Vololona izany. Mpitarika sy hitondra ny vavaka sy ny hafatra ary ny tsodrano kosa ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina.Hiaraka amin’ny jiro sy ny hazavana ary ny fanamafisam-peo anisan’ny raitra ny vavaka sy ny fangataham-pitahiana andiany faha-18, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Toraka izany koa ny mpitendry zavamaneno satria ireo andrarezina amin’izany no hiantsoroka azy. Anisan’ireny i Son (vatamaroafitsoka), i Théo (gitara beso), i Hoby (amponga maroanaka), i Hery (vatamaroafitsoka faharoa), i Manou (saksofona). I Manitra kosa no handrindra azy ireo miaraka amin’ny mpihira. « Nokendrena mba hitohy hatrany ny hafanana… Noho izany, mialoha ny ora handefasana ny afomanga no hifarana ny fandaharam-potoana », hoy hatrany ny mpikarakara.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article RFF Amparibe Famonjena: anio ny vavaka ho an’ny mpanala fanadinana… a été récupéré chez Newsmada.
FANADIHADIANA :: Olona valo nogadraina tamin’ ny fitazonana vehivavy iray
Voatondro ho nitazona vehivavy iray tamin’ny fomba tsy ara-dalàna ny olona valo voasambotry ny mpitandro filaminana, tany Ambararatabe Avatra, distrikan’i Bealanana, herinandro lasa izay. Natolotra ny Fampanoavana izy valo ireo ka samy naiditra am-ponja vonjimaika. Voalaza fa mpikambana ao amin’ny Dina Besaboha, any Ambararatabe Avaratra no nisambotra vehivavy iray izay noahiahiana ho mpamosavy. Notazonin’izy ireo tany io vehivavy io. Ireo mpikambana amin’ny Dina ireo ihany no nanao ny famotorana an’ilay voarohirohy. Tsy naharitra fa nampandre ny mpitandro filaminana ny fianakavian’ilay vehivavy. Nisy tranga toa io ihany koa tany Antsamaka any amin’ny distrikan’ i Bealanana ihany, ny faramparan’ny herinandro lasa teo. Fantatra fa mbola olona mpikambana ao amin’ny Dina Besaboha ihany ireo olona iraika ambin’ny folo nitazona vehivavy iray voatondro ho nangalatra vola 920 000 ariary. Nidina tany an-toerana rehefa naheno izany ny mpitandro filaminana. Vokany, voasambotra ny sivy tamin’izy iraika ambin’ny folo. Noentina any amina toerana lavitra ny tanàna izy ireo hatao famotorana. Andrasana ny tohin’izany sy ny eny amin’ny Fitsarana. L’article FANADIHADIANA :: Olona valo nogadraina tamin’ ny fitazonana vehivavy iray est apparu en premier sur AoRaha.